I-D2M / DG3M inkqubo yeekhamera ezi-3 ze-oblique yekhamera ye-3D yomatshini kunye nabenzi | Imvula
I-D2M / DG3M yikhamera yokuhambelana okuphezulu ephuculwe yiRainpoo esekwe kwimpendulo yomthengi kunye neemfuno nakwiziseko zeemveliso zodidi lwakudala (D2 / DG3). Ukudibanisa ne-DJI M300 RTK, inokufikelela kwi-1: 500 (ukuchaneka ngaphakathi kwe-5cm) kuvavanyo lwe-cadastral ngaphandle kwe-GCPs.
Ezi ntlobo zimbini zeekhamera ze-oblique ziyaqhubeka nezibonelelo zobunzima bokukhanya, ubungakanani obuncinci, ubude obufanelekileyo bokujonga kunye neendleko zokugcina eziphantsi zeemveliso zakudala. Ikwanyusa ukusebenza ngokukuko kokukhuphela idatha kunye nokulungelelanisa iimeko ezahlukeneyo zemozulu. Ayilungelanga kuphela ii-UAVs ze-M210 / M300, kodwa ikwaqhutywa nakwezinye ii-UAVs ezinamacala amaninzi / ezinamaphiko amiselweyo ukwenza imisebenzi emininzi. (I-D2M isebenza kuphela kwii-UAVs ezininzi zeerotor).
I-QTY yeeLens 5pcs
IiPixels ezifanelekileyo I-24.3MP (ilensi enye) / 120MP (iyonke)
Ubude boJoliso 25mm (nkqo) / 35mm (Oblique)
Ubungakanani Ubukhulu: 145 * 145 * 87.5mm
Ubungakanani woluvo I-APS-C, 23.5 * 15.6mm
Ixesha lokuBonisa ≥0.8s
Ilensi yelensi Iqondo le-45
Ukunikezwa Amandla Amandla eSkyPort ahlanganisiweyo
Ukugcina 640GB * 2
Isantya sokukhuphela idatha ≥ 300M / s
Ubushushu bomsebenzi -10 ° C ~ + 50 ° C